Gary Hoffman Ayaa Loo Magacaabay Gudoomiyaha Cusub Ee Premier League? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Gary Hoffman ayaa loo magacaabay gudoomiyaha cusub ee Premier League, Magacaabista ayaa si wada jir ah loogu oggolaaday saamileyda kulan ay yeesheen Maantoo Jimce ah.
Hoffman, gudoomiyaha Monzo Bank, wuxuu kala wareegayaa gudoomiyaha ku meel gaarka ah Claudia Arney 1da Juun.
59-jirkan ayaa horay u ahaa gudoomiyaha hay’adda kubbadda cagta iyo gudoomiye ku xigeenka Coventry City.
“Kubada cagta waxay udub dhexaad u aheyd noloshayda ahaan ahaan taageere ahaan, maamul ahaan iyo meheshadeyda ganacsi, marka waa sharaf ii inaan ku biiro Premier League anigoo ah gudoomiye,” ayuu yiri.
“Intii aan ku sugnaa hay’adda ‘Foundation Foundation’ waxaan arkay sida koritaanka Premier League, si uu u noqdo tartan isboorti inta badan lagu daawado, waxay ka caawisay inay door muhiim ah ka ciyaarto bulshooyinka dalka oo dhan.
“Hadda qof walba oo kubbadda cagta ah, gudaha iyo dibedda, waxay isu imaanayaan si ay isu taageeraan iyada oo loo marayo masiibada COVID-19. Waxaan ku qanacsanahay ruuxan wada jirka ah inay gacan ka geysan doonaan ciyaarta aan jeclahay, iyo Premier League, inaan adkeyno mustaqbalka fog. “
Gudoomiyaha kooxda Chelsea Bruce Buck, oo madax u ah guddiga magacaabida Premier League, ayaa yiri: “Gary wuxuu ahaa musharraxii ugu fiicnaa ee raadinta tartan aad u balaaran oo aad u sareeya, waxaan rumeysanahay inuu la sameyn doono iskaashi xoogan hey’ada Fulinta Richard Masters, isagoo gacan ka geysan doona hanuunka. League halka kor u qaadida fikradaha iyo istiraatiijiyad cusub.
“Gary wuxuu cadeeyay tobanaan sano, inuu yahay fulinta iyo hogaamiyaha guddiga, in uu leeyahay dabeecad uu ku hogaamiyo ururada caanka ka ah waqtiyada wanaagsan iyo xaaladaha qalalaasaha labadaba.
“Waqti aad u muhiim ah oo taariikhdeena ah, aqoonta Gary iyo aqoontiisa ayaa la hubaa inay na caawin doonaan xilligan aadka u adag.”
Hoffman wuxuu la shaqeyn doonaa madaxa fulinta Richard Masters, oo loo magacaabay Premier League bishii Diseembar ee la soo dhaafay.